Medical Engineering - Luoyang abuurtay Tungsten-Molybdenum Waxyaabaha Co., Ltd.
Waayo, qalabka X-ray iyo tomographs computer, soo saarayaasha qalabka caafimaadka meel Eebehoodna tala saarta anodes our taagan iyo bartilmaameedyada X-ray ah TZM, MHC, Alloys tungsten-rhenium iyo tungsten-copper sameeyey. qaybaha Our tube iyo qalabka, tusaale ahaan qaab rotors, qaybaha sita, kiniisadaha cathode, emitters collimators CT iyo shieldings, hadda waa qayb ka mid ah ku istiwooday ee imaging technology casriga ah ogaanshaha.
shucaaca X-ray dhacdaa marka electrons waxaa decelerated at anode ah. Si kastaba ha ahaatee, 99% ka mid ah tamarta la gelin la beddelay kulaylka. Biraha Our adkeysan karaan heerkulka sare iyo in la xaqiijiyo maareynta kaamerada lagu kalsoonaan karo nidaamka X-ray ah.
n berrinkii radiotherapy aan caawiyo soo kabashada ee tobanaan kun oo dadka bukaanka ah. Halkan, sax buuxda oo tayo sarreeya waa lagama maarmaan. collimators Our multileaf iyo shieldings ka daawaha biraha gaar ahaan cufan tungsten-culus Densimet® sameeyey ma weecin millimeter ah ka Ujeedada this. Waxay hubiyaan in shucaaca waxaa diiradda sidan oo kale in ay ku dhoco, unugyada cudurka saxsanaan hel a. Burooyinka loo bandhigi cindiga-sax sare halka unug caafimaad weli ilaaliyo.
Marka ay timaado in daryeelka aadanaha, waxaan jeclahay in aan noqon in complete gacanta. silsilad Our saarka ma bilaabo iibsiga ee biraha laakiin hoos u ah waxyaabaha la cayriin si ay u sameeyaan budo biraha. Kaliya ee habkan aan gaari karo khayroon daahirnimo sare wax in lagu tilmaamay waxyaabaha our. Waxaan sameeyo qaybaha macdan ah ee isafgaradka ka banaan budada furan. Isticmaalka hababka gaarka ah sameynta iyo tallaabooyinka processing farsamo, iyo sidoo kale daahan gobolka-of-the-art oo ku biiray teknoolajiyada, waxaannu u jeesanaynaa, kuwaas oo galay qaybaha adag oo ugu badnaan performanceand tayo fiican.
Molybdenum, Tzm Sheet, Tzm Plate, Molybdenum Rod, Sheet Molybdenum, Molybdenum Plate,